Ahafahana mijery ny fahamatorana sy ny toetran’ny tsirairay ireny, izay hita ihany ny toa fisainan-jaza sy ny tsy fanajana raiamandreny. Tsikaritra ihany ny fiezahana handingana ny tantara dia ny raharaha 2009, ary tena nihazakazahana ny resaka famoahana dosie izatsy sy izao mba hoentina hanadiovan-tena sy hanovana resaka rehefa kepoka eo anatrehan’ny porofo tsy azo hialana, fa nitotongana ny fiainan-dRamalagasy taorian’ny fanonganam-panjakana, niakatra ny tahan’ny fanaovana kolikoly taorian’ny 2009, nihapotika ny tontolo iainana,… Mipatrapatraka ny hoe: hanao an’izatsy na izaroa, hono, rehefa tonga eo. Fa maninona izany no tsy natao e? Maninona ny efa nijoro no nopotehina, fa tsy notohizana raha tena ao tokoa ny fitiavan-tanindrazana e ? Anisan’ny teny iray nanitikitika ny hoe: hanome lanja ny vita Malagasy, hono, amin’ny resaka indostria sy fandraharahana. Fa tsy orinasa Malagasy avokoa ve no nizaka ny tsy eran’ny aina norobaina sy nodorona tamin’ny taona 2009 ? Tsy ny orinasan-dRavalomanana ihany fa maro be, ka ny ankamaroany aza tsy tafarina mandrak’androany. Mba firifiry moa ny orinasa Malagasy nivelatra sy afaka nanana ny anarany sy nifaninana tamin’ny an’ny vahiny tahaka ny “Tiko” taorian’ny 2009. Tsy nisy angamba fa nahazo laka sy nanjakazaka ny hafa satria novolena tamintsika ny toe-tsaina “ory hava-manana”, ary nisy ny tia tena nanaiky natao fitaovana hamotika ny Malagasy, ary rehefa nahazo fahefana dia ny harena nangonina aza tsy najanona eto amin’ny firenena fa any ivelany any ? Izany ve tsy azo adika hoe: ny fitiavan-tena sy ny fifamotehana no lehibe indrindra ? Na io haino aman-jerim-panjakana nanaovana adihevitra io aza anie, ka nisy olona nahavita no nitsodrano ny handeha handroba sy handoro an’io e ! Tantara ireny, saingy tsy tantara fe tantara fotsiny ka hiniana havalona fa kosa mason-tsivana iray hisafidianan’ny Malagasy izay hitondra azy hoe: ny mpanangana sa ny mpandrava sy mpandoro ?